I-COVID-19: Abathengi kanye Nezibalo Zokuthenga ze #StayAtHome | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMeyi 2, 2020 NgoMgqibelo, ngoMeyi 2, 2020 Douglas Karr
Izinto azibukeki zizinhle kakhulu ekusaseni lezomnotho lanoma ngubani uma unikezwa ubhadane kanye nemiyalo yokuvalelwa elandelayo evela kohulumeni emhlabeni jikelele. Ngikholwa wukuthi lo kuzoba umcimbi ozoqopheka umlando ozoba nomthelela omkhulu, ohlala njalo emhlabeni wethu… kusukela ekuqothukeni kwamabhizinisi okushodayo kanye nokusweleka kwemisebenzi, yize kukhiqizwa ukudla kanye nezinsiza kusebenza. Uma kungenjalo, lolu bhubhane lukhombise ukuthi umnotho wethu womhlaba ubuthaka kangakanani.
Lokho kusho ukuthi, isimo esiphoqelelwe njengalesi senza abathengi namabhizinisi bavumelane. Njengoba amabhizinisi enza ingxenye yawo futhi abasebenzi basebenzela ekhaya, sibona ukwamukelwa ngobuningi kwezokuxhumana ngamavidiyo. Mhlawumbe sizofinyelela ezingeni lokunethezeka ngalo msebenzi lapho ukuhamba ngebhizinisi kungancishiswa ngokuzayo - kwehlise izindleko zokusebenza kanye nokusiza imvelo. Akuzona izindaba ezinhle zezimboni zezokuvakasha nezindiza, kodwa ngiyaqiniseka ukuthi zizovumelana.
I-OwnerIQ, etholwe ngu-Inmar ku-Q4 2019, inikezela ngokuqonda okuncane kokuthi abathengi bazivumelanisa kanjani nokujwayelekile kokuhlala ekhaya, bethenga ekhaya, futhi balungisa indlela abazithenge ngayo kuya emikhiqizweni efanele. I-OwnerIQ ihlaziye idatha ye-online shopper kusuka ku-CoEx Platform yabo ukuze inikeze imininingwane, abayethule ngokusobala ku-infographic yabo, Abathengi banjani #StayingHome.
Izinguquko Zokuziphatha Kwabathengi be-COVID-19
Kucace bha ku-infographic ukuthi abathengi basebenzisa imali eyengeziwe ezintweni eziningi:
Izinsiza Ezihlobene Nehhovisi - bathuthukise ukunethezeka nokukhiqiza kwabo ngenkathi besebenza ehhovisi labo lasekhaya.
Isimo Sekhaya - ukutshala imali ezintweni ezenza ukuhlala ekhaya kududuze ngokwengeziwe.
Care Personal - ukutshala imali ezintweni ezenza izingqondo zabo zibe lula ekucindezelekeni kobhubhane nokuzihlukanisa.
Home Care - ngoba sichitha isikhathi ekhaya futhi singaphumi, sitshala imali kumaphrojekthi nasemakhaya ethu.